Chrome 78 inosvika neyakagadziridzwa kuwiriranisa, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva | Linux Vakapindwa muropa
Chrome 78 inosvika neyakagadziridzwa kuwiriranisa, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
Vhiki rino rave iri vhiki rewebhu bhurawuza anotangisa. Kunyangwe inogona kutorwa kubva Muvhuro zvisina tsarukano, Firefox 70 yakavhurwa nezuro wa22 uye pakati pezuro nanhasi kwave nekumwe kuvhurwa, uko kwe Chrome 78. Iyo ndiyo yakanyanya-ku-zuva yakatsiga vhezheni yeGoogle webhu bhurawuza uye zvimwe zvezvinhu zvitsva izvo zvinosanganisira hazvigare chete mudesktop vhezheni, ndiko kuti, dzinogona kushandiswa pamidziyo yeApple.
Kune rimwe divi, Google yakatora mukana ku gadzirisa zvikanganiso zvitatu zvekuchengetedza, senge CVE-2019-13699, CVE-2019-13700 uye CVE-2019-13701, ayo anonzi "emahara-ekushandisa multimedia", "Blink buffer yakafashukira" uye "URL mirroring in navigation" zvichiteerana. Mamwe ese matsva emhando yepamusoro, ayo atinofambira mberi asiri akanyanya kurova, iwe unawo pazasi.
Chrome 78 inosimbisa
Sarudzo nyowani dzekugadzirisa pane iyo nyowani peji peji.
Kunatsiridzwa kwekuenderana pakati pekombuta uye nhare (Android) shanduro dzeChannel. Kubva pane iyi vhezheni, tinogona kutumira rumwe ruzivo, rwakadai senhamba dzenhare, kune zvakawiriraniswa neApple zvishandiso, zvese kubva kubhurawuza. Izvi zvichatibvumidza kufona kubva kufoni tisina kuibaya manya.
Rima modhi inoenderana / inomanikidzwa nemawebhusaiti ese (kubva pane sarudzo mu chrome: // flags / # inogonesa-simba-dema)
Kubvira kwekuratidza ruzivo kana uchifamba pamusoro pematebhu (chrome: // mireza / # tab-hover-makadhi).
Kugadzikana uye kugadzirisa mashandiro.
Chrome 78 yave kuwanikwa yeWindows, macOS uye Linux kubva yavo webhusaiti kwekuisa nyowani. Kune vashandisi varipo, vashandisi veWindows uye macOS vanogona kugadzirisa kuburikidza neOTA, nepo vashandisi veLinux vanogona kugadzirisa kuburikidza neyepamutemo repositi iyo inowedzerwa kana Chrome yaiswa. Kana iri Chromium, kodhi yacho yatovepo, asi sarudzo yakanakisa yeLinux, yayo snap package, ichagadziriswa mumaawa mashoma anotevera. Parizvino, yazvino vhezheni yakagadzika yeChromium ichiri 77.0.3865.120.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Chrome 78 inosvika neyakagadziridzwa kuwiriranisa, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
Ghost, yakavhurwa sosi CMS, inosvika vhezheni 3.0
Miswe 4.0 yave kuwanikwa, inouya zvichibva paDebian 10 Buster, Kernel 5.3.2 uye nezvimwe